Qaar ka mid ah qisooyinka guusha ee dadka uu u gefey Trump | Raadgoob
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa adduunka ka dhaliyay caro xooggan kadib hadalo gef ah oo uu ka sheegay dalalka ay inta badan ka yimaadaan muhaajiriinta Maraykanka gala, isaga oo ku tilmaamay dalal ‘gudaafad’ ah.
Taariikhdeeda ayaa waxaa ku xusan sidii ay waalidkeed uga soo qaxeen Soomaaliya sanadkii 1990-kii “maadaamaa aabaheey uu ahaa waalidka kaligiis ah, wuxuu xushay Minnesota, sababtuna ahayd dariska soo dhaweynta leh ee halkaas degenaa, waxbarasho wanaagsan ayaanan halkan ka helnay” ayay tiri Ilhaan.
Waxa uu BBC-da u sheegay in Donald Trump uu dadka caddaanka ah jecelyahay in ka badan inta uu jecelyahay dadka madoow. “Xitaa ma doonayo in dadka madoow ay u tiriyaan lacagtiisa ama ay shaqo u kala wadaa” ayuu yiri.
Gabadha lagu magacaabo Mia Love waxa ay asal ahaan kasoo jeedaa dalka Haiti oo ka mid ah dalalka uu ‘gudaafadda’ ku tilmaamay Trump, waxaa laga soo doortaa gobolka Utah, iyada oo ku jirta Aqalka Congress-ka Maraykanka.
“Dhaqankiisa waa mid aanan la aqbali karin, kuna habboonayn hoggaamiye dal” ayay tiri.
Iyada oo soo xiganaysa hadalkii aabaheed uu ku dhahay ayay tiri “Mia, adiga iyo hooyadaa waligiin ha aqbalina wax gacanta la’idinka siiyay, dadka ku noqon meysaan culees dulsaaran, waa in aad idinka bulshada wax dib ugu celisaan”.